Sida loogu habeeyo Gmail-ka taleefankaaga Android qaab fudud | Androidsis
Sida loogu habeeyo Gmail taleefankaaga Android
Eder Ferreño | | Codsiyada Android, Khiyaamada Android
Gmail waa codsi muhiim u ah Android maanta. Waxaa lala socdaa casriyaynta markasta oo leh astaamo cusub, sida hab qarsoodi ah ama suurtagalnimada jadwal u dirista emaylka. Intaas waxaa sii dheer, dalabku wuxuu leeyahay faa iidada aan ku badaleyno muuqaalkeeda qaab fudud, si wanaagsan loogu isticmaalo waqti kasta. Markaa waxaan ku habeyn karnaa adeegsiga barnaamijka ku saabsan Android.
Markaas waxaan kuu dhaafi doonaa labo ka mid ah siyaabaha loo habeeyo isticmaalka Gmail-ka ee Android. Si aad sifiican uga adeegsan karto arjiga taleefanka isla markaana aad si fiican ula qabsan karto isticmaalka aad ka sameyso barnaamijka caanka ah ee taleefanka. Waxa aan sameyn doono ayaa waxyar ka bedeleynaa muuqaalka barnaamijka taleefankaaga.
Gmail waa codsi aad loo habeyn karo. Tani waa wax aan horay u soo aragnay sidaan kuu sheegnay. Sidaa darteed, waxaan ku beddeli karnaa dhinacyo kala duwan dalabka boostada ee ku jira Android. Si aan awoodi karno inaan u adeegsanno si dhameystiran. Gaar ahaan suurtagalnimada in la beddelo nooca saxaaraddu waxay noqon kartaa mid xiiso u leh isticmaaleyaasha u adeegsada barnaamijka shaqada, si markaa ay uga faa'iidaysato waxtar badan. Marka xulashooyinkaan waxay u badan tahay inaad adiga daneyneyso arrintan.
Gmail waxay isu diyaarineysaa imaanshaha fariimaha firfircoon. Maxay yihiin iyo maxay u yihiin?
1 Nooca saxaarada ee Gmail
2 Beddel aragtida saxaaradda
Nooca saxaarada ee Gmail
Xeelad aan horey kuugu soo sheegnay horey, taas oo ah beddel nooca sanduuqa boostada ee barnaamijka. Maaddaama naqshadda cusub ay gaartay dalabka, waan awoodnaa deji nooca saxaarada aqbalka in aan dooneyno inaan ku isticmaalno. Waxay kuxirantahay sida aan u isticmaalno arjiga, hal nooc oo saxaarad ah ama mid kale ayaa nagu haboon. Gmail wuxuu noo ogolaanayaa inaan tan si fudud ku sameyno markasta.
Xaaladdan oo kale, waxaan dooran karnaa aqEmail noocee ah ayaan dooneynaa inaan mudnaanta siino? markaan isticmaalno barnaamijka. Sidaa darteed, waxaan wax uga beddeli karnaa qaab fudud. Waxaan ka heli karnaa xulashadan goobaha Gmail. Goobaha waxaa ku jira qayb la yiraahdo nooca sanduuqa, halkaas oo aad ku dooran karto sida aan u rabno inaan u abaabulno, emayllada aan siin doonno mudnaanta. Sidan ayaa si fiican loola qabsan doonaa isticmaalka aan sameyno.
Beddelka ugu fiican ee Gmail ee loogu talagalay Android
Waxay kuxirantahay sida aad Gmail ugu isticmaasho taleefankaaga, qaasatan hadaad u isticmaasho shaqo, waxaa jiri doona saxaarad sifiican ugufiican waxaad sameyneyso. Marka way fiicantahay in kulligood taleefanka lagu tijaabiyo, ka hor intaadan kuu dooran midka kuugu fiican.
Beddel aragtida saxaaradda
Hal muuqaal oo lagu soo bandhigay naqshadeynta cusub ee Gmail waa awoodda lagu doorto muuqaalka saxaaradda. Dareenkan, dalabku wuxuu na siinayaa saddex ikhtiyaar, kaas oo aan ku yeelanno aragti sifiican u habeynaysa waxa aan raadineyno mar walba. Maaddaama aan kala dooran karno saddexda ikhtiyaar: Ku-talagal, raaxo ama isafgarad. Marka xulashada midkood, waxaan arki karnaa sida aragtidan wax looga beddelay arjiga.
Fursadaha raaxada leh ee is haysta waa cusub. Midka koowaad wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isla markaaba aragto cidda xiriiriyaha noo soo dirtay emaylka. In kasta oo haddii aan isticmaalno xulashada is haysta, waxaa loo muujiyaa hab aad u tiro badan oo is haysta, taas oo noo oggolaanaysa inaan muuqaal guud ka helno sanduuqa. Marka qof kastaa wuu dooran karaa ikhtiyaar ugu habboon.
Sida loo adeegsado Gmail on Android adiga oo aan isticmaalin barnaamijka
Marka hore waa inaan galno goobaha Gmail ee kujira Android. Kadibna waxaan galeynaa qeybta la yiraahdo Cufnaanta liiska wada sheekaysiga, halkaas oo aan ka dooran karno ikhtiyaarka u muuqda midka ugu fiican waxa aan u isticmaali doonno barnaamijka. Markasta oo aan dooneyno waxaan ku badali karnaa arjiga. Markaa haddii muddo ka dib adoo adeegsanaya aragti aadan ku faraxsanayn, si fudud ayaad u beddeli kartaa. Aad ugu habboon in loo habeeyo tan markasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu habeeyo Gmail taleefankaaga Android
Codsiyada muhiimka ah ee loo adeegsado Xiaomi Mi Band
Iibinta taleefannada casriga ee Huawei ee Taiwan ayaa si weyn hoos ugu dhacay